Nehemia ma wogyaee apoobɔ no (1-13)
Ná Nehemia dwen nnipa ho (14-19)
5 Ne nyinaa mu no, na mmarima no ne wɔn yerenom redi abooboo kɛse, na na wɔrenwiinwii tia wɔn nuanom Yudafo no.+ 2 Asɛm a na ebinom reka ne sɛ: “Yɛne yɛn mma mmarima ne yɛn mma mmea dɔɔso. Yɛannya aduan a, ɔkɔm bekum yɛn.” 3 Ebinom nso kae sɛ: “Yɛde yɛn hwiit mfuw ne yɛn bobe mfuw ne yɛn afi resi awowa na ama yɛanya aduan wɔ ɔkɔm bere mu.” 4 Ɛnna afoforo nso kae sɛ: “Yɛde yɛn hwiit mfuw ne yɛn bobe mfuw akogye bosea de atua ɔhene tow.+ 5 Yɛne yɛn nuanom nyinaa yɛ nnipa baako;* yɛn mma te sɛ wɔn mma. Nanso yɛreyɛ abrɛ yɛn mma mmarima ne yɛn mma mmea ase ama wɔayɛ nkoa ne mfenaa, na yɛn mma mmea no mu bi mpo de, yɛayɛ wɔn mfenaa dedaw.+ Yenni tumi biara nso a yɛde besiw ano, efisɛ yɛn hwiit mfuw ne yɛn bobe mfuw akodi ebinom nsam.” 6 Bere a metee asɛm yi ne wɔn abooboo no, me bo fuwii yiye. 7 Enti misusuw ho wɔ me komam, na m’ani annye nea atitiriw ne asoafo no ayɛ no ho, na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara mo nuanom na moregye wɔn nsiho.”+ Ɛnna wɔn nti mema yɛbɔɔ gua kɛse. 8 Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛn nuanom Yudafo a wɔtɔn wɔn maa amanaman no, yɛayɛ nea yebetumi biara asan agye wɔn aba; afei moresan atɔn mo ankasa mo nuanom?+ Yɛnsan ntɔ wɔn bio anaa?” Mekaa saa no, wɔyɛɛ komm na wɔantumi anka hwee. 9 Ɛnna mekae sɛ: “Ade a moreyɛ yi nye. Ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn mmom na ɛsɛ sɛ musuro no+ sɛnea ɛbɛyɛ a aman a wɔtan yɛn no rengu yɛn anim ase? 10 Me nso ɛyɛ a me ne me nuanom ne m’asomfo de sika ne aduan fɛm wɔn a yennye nsiho. Mesrɛ mo, momma yennyae nsiho no gye.+ 11 Enti nsiho a mugye wɔ wɔn hwiit mfuw+ ne wɔn bobe mfuw ne wɔn ngodua mfuw ne wɔn afi ho ne nkyem 100 a mugye* wɔ sika ne aduan ne bobesa foforo ne ngo so no, mesrɛ mo, monsan mfa mma wɔn nnɛ dua yi ara.” 12 Ɛnna wɔkae sɛ: “Yɛbɛsan de ama wɔn, na yɛremmisa hwee mfi wɔn hɔ. Yɛbɛyɛ nea woaka no pɛpɛɛpɛ.” Enti mefrɛɛ asɔfo no, na memaa mmarima no kekaa ntam sɛ wobedi bɔhyɛ yi so. 13 Ɛno akyi no, meporoporow m’ataade mu* na mekae sɛ: “Sɛ obi anni asɛm yi so a, ma nokware Nyankopɔn no mporow no mfi ne fi ne n’agyapade mu saa ara; wɔmporow no saa ara mma biribiara mmɔ no.” Ɛnna asafo no nyinaa gyee so sɛ: “Amen!”* Na woyii Yehowa ayɛ. Na ɔman no dii wɔn bɔhyɛ so. 14 Afei nso, efi da a ɔhene yɛɛ me amrado+ wɔ Yuda asaase so, Ɔhene Artasasta+ ahenni afe a ɛto so 20+ kosi n’afe a ɛto so 32+ no, mfirihyia 12 ni, me ne me nuanom nyinaa, obiara annye aduan a wɔde ma amradofo no.+ 15 Amradofo a wodii m’anim no de, wɔde nnesoa a emu yɛ duru soaa ɔman no, na da biara na wogye dwetɛ nnwetɛbona* 40 de tɔ aduan ne nsã.* Wɔn asomfo nso hyɛɛ ɔman no so. Nanso me de, Onyankopɔn a misuro no nti,+ manyɛ saa.+ 16 Afei ɔfasu yi ho adwuma no, misoo mu bi; m’asomfo nso, wɔn nyinaa boaboaa wɔn ho ano wɔ hɔ maa adwuma no, na yɛannye asaase biara.+ 17 Bere a Yudafo ne asoafo 150, ne nnipa a wofi amanaman no mu baa yɛn nkyɛn no, me pon so na wodidii. 18 Da biara na mema wosiesie nantwinini baako, nguan asia a wɔadɔ srade, ne ntakraboa ma me.* Dadu biara nso, na mema wɔde nsã* ahorow ahorow ba. Na mammisa aduan kyɛfa a wɔde ma amradofo no, efisɛ na adwuma a ɛda ɔman yi so no mu yɛ duru. 19 O me Nyankopɔn, nea mayɛ ama ɔman yi nti, kae me na wo ne me nni no yiye.+
^ Nt., “yɛn honam te sɛ yɛn nuanom honam.”
^ Anaa “ɔha mu nkyem baako,” kyerɛ sɛ, bosome biara de.
^ Nt., “meporoporow me kokom,” kyerɛ sɛ, tetefo ataade a wɔayɛ biribi wɔ ne koko so te sɛ kotoku.
^ Anaa “paanoo ne bobesa.”
^ Anaa “ma mefa ho ka.”